ဖေ့ဘုတ်မောင်မောင် | Mg Ogga's Notes
ဒေါက်တာမောင်မောင်၊ စနေမောင်မောင်၊ ရာဟုမောင်မောင်၊ ကာတွန်းမောင်မောင်တို့ စသဖြင့် မြန်မာပြည်တွင် မောင်မောင် များစွာရှိသည်။ အခု ကျွန်တော်ပြောပြမည့် မောင်မောင်ကား ဖေ့ဘုတ်မောင်မောင် ဖြစ်လေသည်။
ဖေဘုတ်မောင်မောင် အင်တာနက် မသုံးခင်က နာမည်မှာ မောင်မောင် ပင်ဖြစ်သည်။သို့သော် အင်တာနက် စသုံးတတ်ပြီးနောက်ပိုင်း ချက်မောင်မောင် ဂျီတော့မောင်မောင် စသဖြင့်ခေါ်ကြသည်။ အခုတော့ ချက်မောင်မောင် ဂျီတော့ မောင်မောင်မဟုတ်တော့ ပိုအဆင်မြင့်လာပြီး တော်လှန်ရေးသမားမျိုးချစ် ဖေဘုတ်မောင်မောင် ဖြစ်လာပြီ။
မောင်မောင်သည် ၁၀ တန်းကျကာ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ လက်ယားလက်ယား ဖြစ်နေချိန် အကိုတစ်ဝမ်းကွဲ မောင်မောင် ပျက်စီးမည်စိုးသောကြောင့် သူဖွင့်ထားသော အင်တာနက်ဆိုင်တွင် ဆိုင်စောင့် ရန် တာဝန် ပေးသည်။ ဒီအချိန်မှစ၍ မောင်မောင် အင်တာနက်ကို စတင်သုံးတတ်လာလေသည်။
မောင်မောင်က ၁၀ တန်း မအောင်သော်လည်း လေ့လာမှုအားကောင်းသည်။ အင်တာနက်ဆိုင်သို့ ရောက်ပြီး ၁ ပတ်လောက်အတွင် Gtalk, MIRC စသည် ချက်တင်ပြောခြင်း အမှုကို ဇာတ်ိဿရဥာဏ်ဖြင့် တတ်သကဲ့ သို့ ချက်ချင်း တတ်မြောက်သွားသည်။ ချက်တင်ပြောခြင်း အမှုကို ကောင်းစွာ တတ်မြောက် ပြီးနောက်ပိုင်း ကျု ခြင်း အမှု ပါ ထူးချွန်မြောက်စွာ တတ်ကျွမ်းလာပြီး အွန်လိုင်း ရည်စား ၁၀၁ တိတ်ိရရှိလေသည်။
တိုးတတ်သောအမြင်ရှိသည့် မောင်မောင် သည် ဂျီတော့ MIRC လောက်တင် အားမရပဲ အင်တာနက် ဘလော့များကို ဖတ်ရှုလေ့လာဖြစ်သည်။ တိုးတတ်သောအမြင်ရှိသည့် မောင်မောင် ထက်မြက်သော မောင်မောင် ဖြစ်သောကြောင့် အင်တာနက်ပေါ်သို့ တင်ထားသော တိုးတတ်သည့် ဘလော့များဖြစ်သည့် ဒေါက်တာချက်ကြီး၊ရာဟုမောင်မောင်၊DKM၊ အကယ်ဒမီ၊ အချစ်ရွာ၊ လူရမ်းကား စသော စသော စပယ်ရှယ် ဘလော့များကို မဖောက်ပြန်သော အမြင်ဖြင့် ကောင်းစွာလေ့လာပြီး ထိုဆိုဒ်များတွင် တင်များသော အရာ အားလုံး အားတိုင်းယားတိုင်း ကိုဒေါင်းလော့ချကာ ဆိုင်ရှိ ကွန်ပြူတာတိုင်းတွင် ထည့်သွင်းပေးထားသည်။ ထိုသို့ပြုပြီး မကြာ ဆိုင်တွင် ကာစတန်မာ(ပုရိသ only)များ နှစ်ဆခန့် များလာ လေသည်။ (လူဝင်နည်းသော အင်တာနက် ဆိုင်များ အတုယူကြရန်- ဤကားစကားချပ်)
တိုးတတ်သောမောင်မောင်မို့ ဒီလောက်နဲ့တင်မရပ်သေး မုခစာအုပ်နာမတွင်သော Facebook တွင် မောင်မောင် အကောင့်ဖွင့်လေသည်။ Facebook တွင်ကား မောင်မောင်များစွာ ရှိသောကြောင့် ၀ိသေသန လက္ခဏာအဖြင့် ဖေ့ဘုတ်မောင်မောင်ဟု အမည်ပေးလိုက်လေသည်။ ဤသည်ကား ဖေဘုတ်မောင်မောင် ၏ စတင်ဖြစ်ပေါ်ပုံတည်း။
ဖေ့ဘုတ်မောင်မောင် ဖေ့ဘုတ်စသုံးတုန်းက ဖေ့ဘုတ်ဆိုတာ ဘာမှန်းညာမှန်း သိပ်မသိ။ အပျင်းပြေ မာဖီးယား၊ ဖန်းတောင်း စတဲ့ ဂိမ်းတွေ ကစားရင်း သူငယ်ချင်းများမှ အဆင်ပြေမည်ဆိုတာ ကို သိသွားသည်။ တွေသမျှ မြင်သမျှ ရှိသမျှ လူအကုန် မိတ်ဆွေစာရင်းသွင်းလေသည်။ ဘော်ဒါများရင် များ သလောက် မာဖီးယားတွင် ဆရာကြီးဖြစ်နိုင်ကြောင်းကောင်းစွာရှိသွားလေသည်။ သိရှိသလို ဖေ့ဘုတ်တွင် ဘော်ဒါများသထက်များအောင်လုပ်လေသည်။ မောင်မောင်ဖေ့ဘုတ် မိတ်ဆွေစာရင်းတွင် နိုင်ငံရေးသမား၊ ဘလော့ဂါ၊ သူဌေး၊ NGO ၀န်ထမ်း လူတန်းစားမျိုးစုံပါဝင်လေသည်။ သိသလိုလုပ် သိတဲ့ တိုင်းလုပ်သော လေးစားဖွယ်ရာ မောင်မောင်ဖြစ်သည်။
နောက်ပိုင်း ဖေဘုတ်တွင် Just Do it ၊ Good တယ်ဆို Do သာ Do ၊ Green minus စသည့်စသည့် fan page/ group page များတွင် အဖွဲ့ဝင်သည်။ ထိုစာမျက်နှာများပေါ်တွင် ရေးထားသော status များကို like လုပ်သည်။ ကောင်းသည်ဟု ပြောပေးသည်။ ရှယ်ပါရစေ လို့ ပြောသည်။ ထိုသို့လုပ်ခြင်းမှာ မောင်မောင် တကယ်ကြိုက် နားလည်လို့ မဟုတ် ဖေ့ဘုတ်တွင် လူချစ်လူခင်များစေရန် ပီယ၀ါစာ နူတ်သံလွတ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
နောက်ပိုင်း ဖေ့ဘုတ်တွင် ထိုင်ရာမှမထပဲ အမျုိုးသားရေး၊ ဘာသာရေး၊ သာသနာရေး၊ နိုင်ငံရေး ဘာညာဘာညာအရေးတို့ကို ဆောင်ရွယ်နိုင်ကြောင်း တိုးတတ်သော အမြင်ရှိသူပီပီ မောင်မောင် ကောင်းစွာ နားလည်သဘောပေါက်သည်။ မောင်မောင်သည် ဖေ့ဘုတ်တွင် အက်တီဗစ်ကြီး တစ်ယောက် ဖြစ်လာသည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်ပေးရေးသည် မောင်မောင်အရေးဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမားများတွင် မောင်မောင်အသိတစ်ယောက်မှမရှိ သို့သော် ဒီကိစ္စသည် အားလုံးအရေး အမျိုးသားရေး ဖြစ်သည်။ မောင်မောင်ရဲ့ wall ပေါ်တွင် ရဲရဲတောက် ရဲရဲနီသော တော်လှန်သော စာသားများကို တွေရမည်။ ရဲရဲတောက်သည့် မောင်မောင့် စာသားများကို မရေးသင့်ကြောင်း နဲနဲ လျောသင့်ကြောင်း ဖောက်ပြန်သူများက ပြောရင် မောင်မောင် ဘက်တော်သား ဆရာဆရာ့ ကြီးများက မိုးမွန်အောင် ထိုသူများကို ဆဲပြီး မောင်မောင် ကို ဂုဏ်ပြုလေသည်။ ရေး ရဲတာ မောင်မောင် တင်ရဲတာ မောင်မောင် ဆဲရဲ တာမောင်မောင် …………….
ဧရာဝတီ အရေးတွင်လည်း မောင်မောင်ပါသည်။ မောင်မောင် ငယ်ငယ်တည်းက ရန်ကုန်မှာ ကြီးလာပြီး ဧရာဝတီမြစ်ဆိုတစ်ခါမှမမြင်ဘူး။ ကြားသာကြားဖူးသည်။ ကိစ္စမရှိ ဧရာဝတီအရေး မောင်မောင် အရေး အားလုံး အရေးဖြစ်သည်။ ဖေ့ဘုတ်တွင်ရှိသော တမျိုးသားလုံး ဧရာဝတီကြသည်။ ဧရာဝတီအရေး ထိုင်ရာမှမထ ကီးဘုတ်နဲ့ အရေးဆိုကြသည်။ အစိုးရသည် ဖေဘုတ်ပေါ်ရှိ ပြည်သူအင်အားကို လန့်သည် ကြောက်သည်။ ဒါကြောင့် မြစ်ဆုံရှိ စီမံကိန်းကို ပယ်ဖျက်လိုက်သည်။ မလိခ နဲ့ မေခ ပေါ်မှာသာ ဆည်ဆောက်တော့မည်။ ဧရာဝတီမြစ်ကို လက်ဖျားနဲ့ ပင်မတို့တော့။ ဖေ့ဘုတ် တော်လှန်ရေးသမားများ၏ အောင်ပွဲတည်း။
အခုလည်း ဖေ့ဘုတ်ပေါ်တွင် ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကို ဆွေးနွေးငြင်းခုန်မှုများပေါ်ပေါက်လာသည်။ တော်လှန်သော အမြင်ရှိသည် မောင်မောင်မှာ ဒီတိုင်းမနေနိုင် ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂါလီများကို လက်မခံသူမှာ လူအများစု ဖြစ်တဲ့ အတိုင်း မောင်မောင်ပြတ်သားစွာဖြင့် မတွေဝေပဲ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ပယ်ပယ်နယ်နယ်ဆဲလေတော့သည်။ မောင်မောင်သည် ရခိုင်သွေးနှစ်ပြားဖိုးမှပါပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်မရောက်ဘူး ရိုဟင်ဂျာဆိုတာကို မတွေ့ဘူး ရိုဟင်ဂျာအကြောင်းသေသေချာချာ မလေ့လာဖူးသော် လည်း အမျိုးသားရေးအသိ အမျိုးသားရေး စိတ်ဓာတ်အပြည့်နဲ့ ရိုဟင်ဂျာကို ထောက်ခံသူများ၊ ရိုဟင်ဂျာကို ထောက်ခံသရောင်ရှိသော စာများကို ရေးသားသူများအား ပယ်ပယ်နယ်နယ်ဆဲလေသည်။ ရိုဟင်ဂျာဆန့်ကျင်ရေးစာများ ရေးသားထားသော ဘလော့များ ဆိုဒ်များမှ ရေးသားထားသော စာများကို မောင်မောင် ဖေ့ဘုတ်ပေ့ခ်ျ်ပေါ်သို့ ကူးတင် လေသည်။ မောင်မောင်အား ဖေ့ဘုတ်အသုံးပြုသည် ရိုဟင်ဂျာဆန့်ကျင်ရေးသမားများက ချီးကျုးထောပနာ ပြုကြ လေသည်။ အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူမောင်မောင် မျိုးချစ်မောင်မောင် တိုင်းပြည်အတွက် သားကောင်း ရတနာမောင်မောင် စသဖြင့် စသဖြင့် ထောပနာပြုခံရလေသည်။
ရိုဟင်ဂျာနဲ့ အပြိုင် မြန်မာပြည်တွင် ပခုက္ကူရေဘေး ကယားပြည်နယ် ရေဘေးများ ဖြစ်နေသော်လည်း လှုံဆော်သူ စိတ်ဝင်စားသူ ဖေ့ဘုတ်တွင်နည်းသောကြောင့် မောင်မောင် ဒီကိစ္စတွေကို မကြည့် စိတ်မ၀င်စား ဖေ့ဘုတ်၏တော်လှန်သော လမ်းစဉ်အတိုင်း စ်ိတ်ဝင်စားသူများတဲ့ တော့ပစ်ကိုပြောမှ ဖေ့ဘုတ်ဆယ်လီဗီတီဖြစ်မည် ဖြစ်သောကြောင့် မောင်မောင် သူများ ရိုဟင်ဂျာသလို လိုက် ဂျာ လေသည်။
တကယ်တော့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာကို မောင်မောင် ဘာမှန်းမသိ ဘာဂျာ ကိုတော့ မောင်မောင် ကောင်းကောင်း သိသည်။ မသိလည်း ကိစ္စမရှိ ဖေ့ဘုတ်တွင် အမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်ဆောင်ရွယ်သူတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ က ပိုအရေးကြီးသည်။ လူပြောများ လူထောက်ခံတာများတဲ့ တော့ပစ်တွင် မောင်မောင် မတွေဝေ မဖောက်ပြန်ပဲ တော်လှန်သောဖေ့ဘုတ်လမ်းစဉ်အတိုင်း ထိုင်ရာမှမထ တိုင်းချစ်ပြည်ချစ် ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက် အဖြစ် ရပ်တည်နေသူကို ဖေ့ဘုတ်မောင်မောင်ဟုခေါ်သည်။
June 27, 2013 in လူမှုရေးရာအဖြာဖြာ, ဟာသသရော်စာ, တွေးမိတွေးရာ. Tags: facebook
← ဦးရွှေအောင်၏ ခန္ဓာငါးပါး နဲ့ Maslow’s hierarchy of needs
သာသနာ့ရေသောက်မြစ်ကြီး အရေး အပိုင်း ၁ →